Oge ezumike na ọdịnala na Thailand | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | General, Tailandia, Asia njem
Thailand bụ otu n'ime obodo na-adọrọ mmasị Ileta n'akụkụ ụwa niile na onye ọ bụla garalarị ma ọ bụ onye nọrọtụ oge ebe ahụ, amaara m na ha ga-agwa gị otu m si ede ya n'onwe m.
Ọ bụ mba ebe ọdịbendị na nkwenkwe dị iche iche nye ndị nke Ọha Anyanwụ. Taa, achọrọ m ịgwa gị maka ememme na ọdịnala na Thailand ka ị wee nwee ike ịmara nnukwu obodo a obere.
1 Omenala Buddha
2 Sgha na owuwe ihe ubi na May
3 Ezimezi oku kwa na May
4 Ememme ndị anaghị eri anụ
5 Ememme elephant
6 Ememme Loi Kratong
7 Ihe mara ma ọ bụrụ na ị na-aga Thailand na nke mbụ
7.1 Na-asọpụrụ ezinụlọ ndị eze
7.2 Ekele ọdịnala
7.3 Omume nke anụ ahụ
7.4 Wepu akpụkpọ ụkwụ
7.5 Oge agba
7.6 Mai nku rai
7.7 Nri bu ihe obodo
7.8 Ekpere maka mmiri ozuzo
Imirikiti emume ndị Thailand na-eme bụ emume Buddha na nke Hindu ma na-achịkwa kalenda ọnwa.. A na-eme Songkran (Afọ Ọhụrụ) n'etiti ọnwa Eprel site na ịsa ahụ ihe oyiyi Buddha, na-egwu mmiri ma na-akwanyere ndị mọnk na ndị okenye ùgwù site na ifesa ha aka.
Sgha na owuwe ihe ubi na May
Gha mkpụrụ na owuwe ihe ubi wepụtara ọtụtụ ememme; ka ihe atụ, na May, na eze na-amalite akuku oge, eze na-ekere òkè n'ememe ọdịnala ndị Hindu n'oge ochie na Sanam Luang, nnukwu ubi dị na etiti Bangkok.
Ezimezi oku kwa na May
N’otu ọnwa a, a na-eme emume oku eji eme ihe site na ngwakọta achara na gunpowder na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ iji jụọ igwe maka mmiri ozuzo dị mkpa maka ubi osikapa. Owuwe ihe ubi nke ọka a (Septemba-Mee) ọ bụ ihe kpatara mmemme ọ joụ na mba ahụ dum.
Ememme ndị anaghị eri anụ
N'oge ememme ndị anaghị eri anụ a na-eme site na ngwụcha Septemba ruo na mbido Ọktọba (ụbọchị 9) na Phuket na ndị na-efe Buddha Buddha nke Trang na-eri naanị nri anaghị eri anụ, ha na eme nme na ulo uka ndi China.
Ememe enyí, nke emere na Surin n'etiti ọnwa Nọvemba, bụ ọnụọgụ kachasị elu nke enyí n'ụwa. N'oge ememme a, enyí ndị ahụ na-eme ihe ngosi agha, na-anọchite anya agha oge ochie ma na-egwu egwuregwu bọọlụ!
Ememme Loi Kratong
N’ikpeazụ, Loi Kratong bụ otu n’ime ememme ndị kachasị mma ma a na-eme ya n’Alaeze ahụ n’abalị ọnwa ọhụụ n’ọnwa Nọvemba. Na ememme a, ndị mmadụ na-agbakọta ogologo osimiri na ọwa mmiri ma tinye obere ụgbọ mmiri ndị a chọrọ mma na kandụl iji rịọ mgbaghara maka ihe ọjọọ ha n'oge gara aga.
Ihe mara ma ọ bụrụ na ị na-aga Thailand na nke mbụ
Na-asọpụrụ ezinụlọ ndị eze
Ezinaụlọ dị na Thailand ji nkwanye ugwu dị ukwuu, na-ekwu okwu nlelị banyere onye ọ bụla nke ezinụlọ eze megidere ego ahụ, ntaramahụhụ ya nwere ike ịbụ n'agbata afọ 3 na 15 n'ụlọ mkpọrọ dabere na oke okwu.
A na-akpọ ekele ọdịnala "wai" a na-eme ya site na ịpị aka n'ọbụ aka aka n'elu igbe ma ọ bụ na ogologo nke imi, na-ehulata isi ntakịrị. Nke a bụ ngosipụta nke a ga-eme mgbe niile n'ihi na ọ na-egosi nkwanye ùgwù ma enwere ike iji ya gosipụta ahụike, daalụ ma ọ bụ iji sị goodbye.
Na omenala Thai enwere otutu ihe ime mmụọ na akuku ahu. Dịka ọmụmaatụ, ị nweghị ike ịtụ aka n'ụkwụ ndị mmadụ, imetụ ha aka ma ọ bụ tinye ụkwụ gị n'oche ma ọ bụ na tebụl, ị nweghịkwa ike ịgagharị ndị nọ ọdụ n'ala. Isi ka mkpa, yabụ na ị gaghị emetụ isi mmadụ aka ebe ọ bụ na a na-ewere ya dị ka ihe kachasị njọ.
Ikwesighi izere ịnọdụ ala na ohiri isi echere maka isi. Ọ bụrụ na ị gafere nri a dọbara n’ala, ọ ga-abụ mmegharị ahụ na-akparị nke ị na-ekwesịghị ime.
Wepu akpụkpọ ụkwụ
Ọ bụrụ n ’ịgagharị na Thailand ị ga-ahụ akpụkpọ ụkwụ ole dị nso n’ọnụ ụzọ ụlọ, ụlọ ahịa ma ọ bụ ebe ọzọ, ịkwesịrị iwepụ ha n’ihi na a na-ewere ya dị ka enweghị nsọpụrụ idebe akpụkpọ ụkwụ gị. A ga-ahapụrịrị unyi sitere na akpụkpọ ụkwụ n'ime ụlọ ndị ahụ.
Dabere na akụkọ mgbe ochie Buddha mgbe ochie, enwere agba ndị metụtara ya kwa ụbọchị n'izu. A na-ahụ nke a nke ọma na Mọnde mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-eyi uwe elu edo edo n'ihi na ha ghọtara na sọpụrụ ụbọchị a mụrụ Eze. Colorsdị ndị ọzọ na-ewu ewu bụ pink maka Tuesday na acha anụnụ anụnụ maka Fraịdee, nke bụ ụbọchị a mụrụ Queen. Agba uhie na odo dịkwa mkpa n'ihi na ha na-anọchite anya ike nke ndị mmegide.
Mai nku rai
Nkebi ahịrịokwu "Mai feather rai"Pụtara ihe dịka" ọ dịghị mkpa "ma ọ bụ ikekwe" chefuo ya. " Nkebi okwu a na-akọwa nkà ihe ọmụma gọọmentị nke mba ebe ọ na-enweghị onye ọ bụla nwere mmasị ịnagide ọnọdụ ndị na-akpasu iwe. N'ihi gịnị ka a ga-eji chegbuo onwe gị banyere ihe ndị na-adịchaghị mkpa? Mai nku rai!
Ọ bụ ụdị echiche dị jụụ nke metụtara mmetụta na mmetụta ndị mmadụ, ọ bụ iji ihe akpọrọ ihe nke ukwuu na na ihe ọ bụla nwere ike ịnwe ụfọdụ egwuregwu.
Nri bu ihe obodo
E nwere ọdịnala mara mma nke na-esi nri. Eri bụ ihe omume obodo na ọ bụ mmemme a ga-enwe ọ .ụ. Ọ na-abụkarị mgbe gị na ndị mmadụ na-eri nri, ị ga-eche ka onye isi otu ndị ọbịa ọbịa bido iri nri.
Ekpere maka mmiri ozuzo
Omenala Thai nke na-atọ ndị ọbịa ụtọ bụ ememme ndị a na-ekpe n’ekpere maka mmiri ozuzo. Ndi oru ugbo na-adabere na mmiri ozuzo maka ezigbo owuwe ihe ubi ya mere ha nwere otutu uzo di iche iche iji kwalite oge udu mmiri.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ọdịbendị Thai sara mbara na ihe ịtụnanya niile ị nwere ike ịchọta ma ọ bụrụ na ị gaa ọmarịcha obodo a ma bie ma nọrọ ụbọchị ole na ole na ezumike. Ma ndị ya ma ihe ncheta ya na ala mara mma agaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Ọ bụrụ n ’ịlaghachi n’obodo gị, ama m na ị ga-achọ ịlọghachi ngwa ngwa ka ịnwee ike ịnụ ụtọ ihe niile ọ nwere inye gị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Tailandia » Oge ezumike na ọdịnala na Thailand
Eziokwu na Ozi banyere Europe